नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : जनताहरु हो जिउँदै मुर्दा बनेर कती सुत्छौ अब त उठ, अती भो ! सहनुले पनि सीमा नाघ्यो !
जनताहरु हो जिउँदै मुर्दा बनेर कती सुत्छौ अब त उठ, अती भो ! सहनुले पनि सीमा नाघ्यो !
माओवादीहरुको फुट नाटक मात्र त होइन ??!! हेर्नुस् देश बन्द गर्न, अस्तब्यस्त बनाउन, संबिधान बन्न नदिन छबिलाल, बाबुराम, बैद्य, बादल र नारायणकाजीहरु को साँठ गाँठ !
माघ ८ मा संविधान जारी नहुने दाबी गर्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संविधान जारी गर्न नसक्नुमा चार दलका एक दर्जन शीर्ष नेता जिम्मेवार
संविधानसभाको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालले फागुन र चैतमा जनमत संग्रह गरेर वैशाख वा जेठमा संविधान जारी हुने बताएका छन्। बुधबार राप्रपा नेपालको संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बहुमतीय प्रक्रियाबाट जारी हुने संविधान अस्वीकार हुने बताउँदै जनमत संग्रहबाटै संविधान जारी हुने बताएका हुन्। 'माघ ८
भित्र संविधान बन्छ भने आफ्नो मान्यता स्थापित नभए पनि स्विकार गर्ने भन्ने थियो भने अब त्यो स्थिति नरहेपछि आगामी माघ फागुनमा जनमत संग्रह र बैशाख जेठमा संविधान बनाउनु पर्छ।' माघ ८ मा संविधान जारी नहुने दाबी गर्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संविधान जारी गर्न नसक्नुमा चार दलका एक दर्जन शीर्ष नेता जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
यसैबीच थापाले अब धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताबारे जनमत संग्रह गर्नुको विकल्प नभएको बताए। कांग्रेस-एमाले, माओवादी-मधेसवादी र राप्रपा नेपालले अघि सारेको तीन विकल्पलाई जनतामाझ लैजानु पर्ने उनले बताए। थापाले भने-‘तीन वटै विकल्प जनतामा लैजानुपर्छ। जनताको फैसला हामी मान्छौं।
'मैले संविधानसभामा प्रवेश गर्नसाथ प्रचण्ड र सुशील सग किन धम निरपेक्षमा जानु भयो गणतन्त्रम र संघीयतामा जानु भयो भन्ने प्रश्न गर्ने सोचमा थिए। तर, विना छलफल ८ गतेकेा मिति तुहाइदिनु भयो। हामी छलफल गरी पराजित हुन तयार थियौं तर त्यो हुन पाएन।'
थापाले संविधानका अन्तरवस्तुबारे संविधानसभामा पाँच मिनेट समेत छलफल हुन नपाएको बताए। 'कांग्रेस-एमाले र एमाओवादीसँग बसेर बहस गरौला भनेको थिएँ तर एक वर्षको समयमा ५ मिनेट पनि छलफल हुन सकेन,'उनले भने।
संविधानसभा र सम्वाद समिति नभइ शीर्ष नेताहरु नै यस मामलामा असफल भएको भन्दै थापाले असफलताका लागि नैतिक जिम्मेवारी लिएर उनीहरुले आत्मालोचना गर्न शीर्ष नेतालाई सुझाव दिए।
माघ ८ गतेको राजनीतिक प्रतिबद्धता समाप्त हुनेसाथ राजनीतिक बैध्यता पनि समाप्त भएको भन्दै थापाले यसमा चार दलका शीर्ष नेता जिम्मेवार भएकोले उनीहरुले नैतिक जिम्मेवार लिनु पर्ने बताए।
'सबै राजनीतिक दल असफल भएको होइनन् प्रमुख चार दलका शीर्ष भनिएका नेताहर असफल भएका हुन। उनीहरुले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्छ। नैतिक जिम्मेवारी कुन प्रकारले लिने भन्ने उनीहरुले नै विचार गर्ने विषय हो।'
०४७ को संविधान आफूहरुको माग नभएको भन्दै थापाले संविधानसभाबाटै जनताको संविधान बन्नु पर्ने जिकिर गरे।
यसैबीच कांग्रेस र एमालेका युवा सभासदहरुले सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानमा आफ्नो दलका सभासहरुले हस्ताक्षर नगरेको प्रष्ट पारेका छन्।
१) जनसंघर्ष वारे
नेपाली जनताको चाहना तथा राजनैतिक दलहरुको सामुहिक प्रतिबद्धताका बावजुद आगामी २०७१ माघ ८ गते भित्र संबिधान नबन्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रति राप्रपा नेपाल गंभीर चिन्ता प्रकट गर्दछ। निर्धारित समय भित्र संबिधान बन्न नसक्नुमा मुलत संबिधानसभाको अधिकारलाई अपहरण गरि सर्वसत्तावादी ढंगबाट काम गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले), एकिकृत नेकपा(माओवादी) र मधेशवादी दलका शिर्ष नेताहरु जिम्मेवार रहेका छन्। ती नेताहरुको अकर्मण्यता, सत्तालिप्सा र असक्षमता नै संबिधान नबन्नुको मुल कारण हो। माघ ८ गते भित्र घोषित प्रतिवद्धताको वावजुद पनि संबिधान बन्न नसकेकामा ती दलका नेताहरुले आत्मालोचनाका साथैे नैतिक जिम्मेवारी समेत लिनु पर्दछ।
राप्रपा नेपालले संबिधानसभाको प्रारम्भ देखि नै अन्तरिम संबिधान र संबिधानसभा नियमावलीमा भएको विधि र प्रक्रिया अनुरुप संबिधान निर्माणको गरिनु पर्नेमा जोड दिंदै आएको हो। आफ्नो फरक मान्यता र एजेण्डाका वावजुद पनि विधि र प्रक्रिया अनुसार गरिने निर्णय पार्टीले स्विकार गर्ने धारणा हामीले बारम्वार व्यक्त गर्दै आयौ। तर, विधि र प्रक्रियालाई अबरुद्ध गरि केहि सिमित राजनैतिक दलका पनि सिमित नेताहरुले संबिधानसभा बाहिर निर्णय गर्ने अनि त्यस्तो निर्णय संबिधानसभामा लादेर संबिधानसभालाई रबर स्ट्याम्पका रुपमा प्रयोग गर्ने दुस्प्रयास संविधानसभा गठन भए देखिनै जारि राखियो। सहमति निर्माणको प्रक्रियामा जनताको अभिमतबाट स्थापित देशको चौथो ठुलोे राजनीतिक शक्ति राप्रपा नेपाललाई शुरुदेखि नै नियोजित रुपमा निषेध गरियो। अन्ततः संबिधान नै नबनाई निर्धारित समय गुजार्ने षडयन्त्र गरियो।
समयमा संबिधान बन्न नसकेबाट संक्रमणकाल अझै लम्बिने निश्चित भएको छ। त्यसर्थ, जनयुद्ध र जनआन्दोलन पछिको गलत मार्गचित्रको परिणामस्वरुप देशमा गत १९ बर्षदेखि कायम रहेको अन्यौल, अनिश्चता र अराजकताको अन्त्यका लागि फेरि एकपटक जनताले संघर्षमा उत्रनु बाहेक अर्को विकल्प नरहेको राप्रपा नेपालको ठहर रहेको छ।
माघ ८ गते भित्र संबिधान नबन्ने भए पछि अब सहमति हुन नसकेका विवादित बिषयहरु अर्थात धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता वारे आगामि फाल्गुण वा चैत्र महिनामा अन्तरिम संबिधान र नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभुसत्ताको सम्मान गर्दै जनमत संग्रह गरिनु पर्दछ भन्ने राप्रपा नेपालको निस्कर्ष रहेको छ।
यसै बास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै संक्रमणकालको अन्त्य र जनमत संग्रहको फैसला अनुरुप संबिधान निर्माणको निमित्त राप्रपा नेपालले आगामि माघ ४ गते देखि देशव्यापि दवावमुलक जनसंघर्षको कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
क) नंया संबिधानमा हिन्दुराष्ट्रको सुनिश्चितता,
ख) धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघियता वारे जनमत संग्रह
जनसंघर्षको पहिलो चरणको कार्यक्रम
२०७१ साल माघ ४ गते
क) देशको सम्पुर्ण जिल्ला सदरमुकाममा प्रदर्शन, ¥याली तथा जनसभाहरु आयोजना गरिने छ,
ख) काठमाण्डौ उपत्यकामा बबरमहलबाट जुलुस शुरु गरि संबिधानसभा भवन अगाडि बानेश्वरमा धर्ना र घेराउ कार्यक्रम गरिने छ।
माघ ६ गतेः आगामी संविधानमा नेपाललाई सनातन हिन्दुराष्ट्र घोषणा गरिनु पर्छ भन्ने मागका साथ देशभर संकलन गरिएको हस्ताक्षर जुलुसका साथ गै संबिधानसभाका अध्यक्षलाई बुझाईने छ।
जनसंघर्षको थप कार्यक्रमहरु पछि निर्धारण गरिने छ।
जनसंघर्ष प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गर्न पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा जनसंघर्ष परिचालन समिति गठन गरिएको छ।
२) बैठकले पार्टीले २०७१ साल पौष ९ गतेबाट संचालन गरेको मेची महाकाली श्री पशुपतीनाथ रथयात्राको क्रममा आमजनताबाट प्राप्त अपार सदभाव, सहयोग र समर्थन प्रति हार्दिक आभार प्रकट गरेको छ। बैठकले रथयात्र सफल तुल्याउन योगदान पुराउने पार्टीका बिभिन्न तहका निकायहरु, भातृसंगठन, बिभिन्न बिभाग तथा समिति र कार्यकर्ताहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। साथै, आसंचार माध्यम तथा धार्मिक र सामाजिक संस्थाहरुबाट प्राप्त सहयोग प्रति समेत बैठकले कृतज्ञता प्रकट गरेको छ।
३) बैठकले हालै डढेलधुरा जिल्लाको सदरमुकाम अमरगढि नगरपालिकामा भएको भिषण आगलागिमा ठुलो क्षति भएकोमा दुःख प्रकट गर्दै पिडितहरुलाई तत्काल राहत र सुविधा उपलव्ध गराउन सरकारसंग माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
४) लामो समयदेखि खाना पकाउने ग्यासको अभावलाई सरकारले तुरुन्त उच्च प्राथमिकताका साथ यो समस्याको समाधान गरोस भनि बैठकले निर्णय गरेको छ। साथै, बैठकले निरन्तरको चर्को महंगी, अभाव र कालोबजारीको समस्या बारे सरकारको उदासिनता प्रति खेद प्रकट गर्दै अबिलम्ब जनतालाई राहतको कार्यक्रम संचालन गरोस भन्ने माग समेत गरेको छ।
५) पार्टी प्रति आमजनतामा बढदो आस्था र बिश्वासलाई संचीत गरि राप्रपा नेपाललाई देशको अग्रणी राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने क्रममा संगठन सुदृढिकरणको अभियानलाई अझ तिव्रतर पार्नुे निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। यसै क्रममा पार्टीको संगठनात्मक संरचना सम्पुर्ण नगरपालिका र गांउ बिकास समितिका वडा तह सम्म पु¥याउने उदेश्यका सथा ूहरेक वडामा राप्रपा नेपाल अभियानू संचालन गरिने छ। त्यसै गरि पार्टीको संगठन र प्रभाव समाजको सबै वर्गिय, व्यवसायिक तथा पेशागत क्षेत्रमा बिस्तार गर्न हरेक क्षेत्रमा राप्रपा नेपालू नामक कार्यक्रम अभियानका रुपमा संचालन गरिने छ। यो अभियानलाई प्रभावकारी एवं व्यवस्थित ढंगबाट संचालन गर्न विस्तृत कार्ययोजना र कार्यतालिका तयार गरि कार्यान्वन गरिने छ।
नेपालमा चाँडै राजतन्त्र फर्कन्छ र त्यो राजगद्दीमा हिमानी या हृदयेन्द्र बस्ने सम्भावना छ ।
- प्रकाश काेइराला, वीपीपुत्र एवं पूर्वमन्त्री
वीपी कोइरालाका छोरा प्रकाश कोइराला एकजना ‘उदार तानाशाह’को खोजीमा छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएपछि नेपाली कांग्रेसबाट उनी टाढिएका हुन् । तर, वीपीपुत्र प्रकाशलाई अहिले पनि दृढ विश्वास रहेछ, नेपालमा चाँडै राजतन्त्र फर्कन्छ र त्यो राजगद्दीमा हिमानी या हृदयेन्द्र बस्ने सम्भावना छ ।
वीपीको संगतमा परेर राजनीतिक विश्लेषण गर्न सिकेका प्रकाशसँग अनलाइनखरले ‘करेन्ट पोलिटिक एनालाइसिस’ सम्बन्धी घुमाई-फिराई प्रश्न गर्दा उनले अहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तन हुने दाबी दोहोर्‍याए । अब हरेक कुराको फैसला सडकबाटै हुने उनले विश्लेषण सुनाए ।
सुशील कोइरालाले सरकार चलाउन नसकेको र संविधान पनि बनाउन नसकेको निश्कर्ष निकाल्दै प्रकाशले अब केही समय राष्ट्रपति शासन लागू हुने र त्यसपछि सैनिकले शासन गर्ने अनि राजतन्त्र फर्किने दाबी गरे । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सरकार चलाउन सक्षम ‘कुशल प्रशासक’ भन्दै कोइरालाले खुलेरै प्रशंसा गरे -
तपाई वीपी कोइरालाका छोरा, अचेल कांग्रेसका नेताहरु सल्लाह माग्न आउँदैनन् ?
कहिलेकाहिँ सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यूकहाँ गइराख्छु । आफूलाई लागेका कुराहरु भन्छु ।
तपाईसँग अहिलेको राजनीतिक समस्याबाट निकास पाउने केही उपायहरु पनि छन् कि ?
हेर्नोस्, नेपालको अहिलेको जुन किसिमको राजनीतिक स्थिति छ, यो धेरै दिन रहँदैन । अब यो ‘वल्र्ड अर्डर’मा पर्न गयो । त्यसैले नयाँ परिस्थिति जन्मिइसकेको छ ।
के हो त्यो नयाँ परिस्थिति ?
नयाँ परिस्थिति भन्नाको अर्थ यो माघ ८ पछि यहाँ धेरै ठूलो राजनीतिक उथल-पुथल हुन्छ । संविधान जारी भए पनि उथल पुथल हुन्छ, नभए पनि हुन्छ । तर, संविधान जारी नहुने सम्भावना बढी देखिएको छ । कांग्रेस, एमालेका नेतृत्व वर्गका मान्छेले नै भनेका छन् कि संविधान बन्दैन । संविधान बन्छ भनेर उनीहरुले नेपाली जनतालाई जुन भ्रम पारिरहेका छन्, त्यो मलाई विश्वास लाग्दैन । संविधान आउँदैन भन्ने मेरो नतिजाले देखेको छ । किनभने कुनै पनि बुँदामा यिनीहरु मिलेकै छैनन् ।
माघ ८ मा संविधान आएन भने के हुन्छ ?
आएन भने यो संविधानसभाको पाँच वर्षको म्यान्डेट छ । बाँकी ४ वर्ष सरकार चलाउने या सत्तामा बस्ने प्रयास हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
माघ ८ पछि सुशीलको ठाउँमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्छन् ? एमालेले सुशीललाई ठाउँ छाडिदेऊ भन्छ कि भन्दैन ?
त्यो त भन्छ भन्छ । सरकार बन्ने बेलामा जेजे सम्झौता भएको छ, त्यो अनुसार त उहाँ (सुशील)ले जानुपर्‍यो ।
संविधान बनेपछि पो सुशीलले छाड्ने भनेको थियो, नबनी नछाड्ने भन्लान् नि कांग्रेस नेताहरुले ?
त्यो त हो । तर, त्यहाँ यो पनि भनिएको थियो कि एक वर्षभित्र हामी संविधान बनाउँछौं । एक वर्षमा संविधान नबनाउने उनीहरुले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । एक वर्षको म्याद त अब सकिँदैछ त ।
तपाईचाँहि के भन्नुहुन्छ ? संविधान नबने पनि माघ ८ पछि सुशीलले ओलीलाई छाडिदिनुपर्छ ?
म के भन्छु भने उहाँहरुको जे सम्झौता भएको थियो, त्यही गर्नुपर्छ । हेर्नुहोस्, राजनीतिमा अलिकति पनि नैतिकता भएन भने त्यसको कुनै पनि अर्थ हुँदैन । यदि मैले एक वर्षमा मैले छाडिदिन्छु र खड्ग ओलीजीलाई दिने भन्ने सम्झौता भएको छ भने मलाई लाग्छ उहाँले त्यसमा अडिग हुनुपर्‍यो ।
तपाईसँग भेट हुँदा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ ?
मैले त उहाँसित कुरा गर्दा संविधान आउँदैन भनेर उहाँको मुखैमा भनेको छु मैले । उहाँलाई मैले यहाँसम्म भनेको हुँ कि तपाईको मुखमा संविधानबाहेक अरु केही छैन । तर, के भइरहेको छ भने सरकार चलिरहेको छैन । सरकार पूरै प्यालाइज्ड छ । तपाईले के गर्नुभयो ? संविधान पनि तपाईले बनाउन सक्नुभएन र सरकार पनि दिन सक्नुभएन । भोलि तपाईलाई दुईवटा आक्षेप लाग्छन् । तपाईलाई इतिहासले छाड्दैन । एउटा कमजोर किसिमको प्रधानमन्त्री, जसले राम्ररी शासन गर्न सकेन र अर्को, संविधान पनि दिन सकेन । भन्दाखेरि तपाई टोटल फेलियरको नमूना हुन जानुहुन्छ । वल्कि के गर्नोस् भने संविधान ल्याउने प्रयास गर्नोस्, तर त्यतिकै महत्व तपाईले सरकार चलाउनेतिर पनि दिनुपर्‍यो । यहाँ कस्तो परेको छ भने सरकारै छैन जस्तो अनुभूति मान्छेहरुलाई हुन थालिरहेको छ ।
केपी ओलीलगायतले संविधानसभा नियमावलीका धारा निलम्बन गरेर भए पनि माघ ८ मै संविधान बनाउन जोड गरिरहेको सुनिन्छ । तपाईलाई कस्तो लाग्छ, त्यसरी माघ ८ मै संविधान बनाउन ठीक कि एक दुई महिना ढीलो गरेर सहमतिमा बनाउन ठीक ?
हेर्नोस्, ७/८ वर्ष बितिसक्यो । संविधान त बन्दैन । जो आओस् ।
केपी ओली नै आए पनि संविधान बन्दैन ?
सुन्नोस् न, केपी ओली आएको खण्डमा एउटा थोकचाँहि निश्चित छ, सरकार चाँहि उहाँले राम्ररी चलाउनुहुन्छ । संविधान बनाउन सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न त्योचाँहि म भन्न सक्दिँन । तर, संविधान आउँदैन । केपीले गरेर पनि संविधान आउँदैन । तर, मैले केपी ओलीलाई गृहमन्त्री हुँदाखेरि नै देखेको थिएँ, उहाँमा मैले एउटा कुशल प्रशासकको क्षमता पाएँ । उहाँ निर्णय गर्न सक्ने व्यक्ति हो । मुलुक अहिले अनिर्णयमा बसेको छ । डेफिनेट्ली केपी ओली बेटर एड्मिनिस्ट्रेर वा प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ । संविधान नभए पनि सरकार चलाउने पक्षमा उहाँ सक्षम देखिनुहुन्छ ।
सभामुखलाई अधिकार दिएर पेलेर भए पनि संविधान जारी गर्दा के हुन्छ ? सत्तापक्षसँग दुई तिहाइ बहुमत पनि त छ नि आखिर ?
हेर्नोस्, ८ वर्षदेखि सहमतिको राजनीति भयो । तर, मैले त्यति राम्रो स्थिति देखिराखेको छैन । मलाई कता-कता के लागिरहेको छ भने यो व्यवस्था नै कता-कता पुरानो व्यवस्थामा परिणत हुन थालिरहेको छ । अब यो व्यवस्था नै रहँदैन । अब यसमा आमूल परिवर्तन हुन्छ ।
कस्तो आमूल परिवर्तन ?
आमूल परिवर्तन भन्नाले एउटा ठूलो ग्रुपले हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भनिरहेको छ । अर्को गु्रप छ, जसले ०४७ सालको संविधान फिर्ता लिएर आउनुपर्छ भनिरहेको छ । मैले मोटामोटी ०४७ सालकै संविधान आउने सम्भावना देखिराखेको छु ।
यसको के आधार छ ?
नेपालमा हेर्नोस् राजनीतिक आधार भनेको विदेशी आधार हो । यहाँ नेपाली जनताले तय गरेको मलाई थाहा छैन ।
तपाईले भन्न खोज्नुभएको के हो ? केपी ओलीले केही समय सरकार चलाउँछन्, संविधान बन्दैन अनि को आउँछ ? कमल थापा ?
मैले २५ वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा के देखिरहेको छु भने नेपालमा जुन परिवर्तन भइरहेको छ, यो सडकबाट भइरहेको छ । सडक आन्दोलनबाट परिवर्तन भइरहेको छ । जनमतबाट भइरहेको छैन । यसलाई म क्रान्ति भन्दिँन । यसलाई सडक क्रान्ति भन्नोस् । सडकलाई तताइदिने, अनि त्यसपछि परिवर्तन गराइदिने । यो हामीले बोकेको राजनीतिक लिगेसी अनुरुप नै म के हेरिरहेको छु भने सडक फेरि तातिँदैछ । त्यसैले यो अहिलेको ढाँचा अवश्य रहँदैन । नयाँ ढाँचा आउने सिलसिलामा छ ।
कसले तताउँछ सडक ? को आउँछ त्यो ‘नयाँ ढाँचा’को नेतृत्वमा ?
हेर्नोस् यसमा खाली दलहरुमात्रै छैनन् । बाहिरका तत्वहरु पनि छन् यहाँ । र, यसचोटि पनि सडक तातिन्छ । विदेशी शक्तिहरु त्यसमा होमिन्छन् । यो निश्चित छ ।
तातिएको सडकले के गर्छ ?
सडकले के गर्छ ? सडककै आन्दोलनले हामीलाई दिल्लीमा पुर्‍याएको होइन ? प्रचण्डजीले १० वर्ष जुन क्रान्तिकारी आन्दोलन गर्नुभयो, आखिर त्यो केमा परिणत भएको छ भन्दा सडक आन्दोलनमा परिणत भएको छ । सडक आन्दोलनले कहाँ पुर्‍यायो भन्दा नयाँ दिल्ली पुर्‍यायो । १२ बुँदे सम्झौता त्यहाँ भयो ।
हेर्नोस्, कुनै पनि आन्दोलनको स्वरुप के हुन्छ भने जुन मुलुकमा आन्दोलन हुन्छ, त्यही मुलुकमा त्यसको अन्त्य पनि हुन्छ । हामीकहाँ के भयो भने यहाँ सडक तातिन्छ, त्यसको सम्झौताचाँहि नयाँ दिल्लीमा हुन्छ ।
तपाईको भनाइको मतलव सडक तातिएपछि यो केस नरेन्द्र मोदीसम्म पुग्छ ?
मोदीको आगमनले दुई/तीनवटा कुरा प्रष्ट पारिदिएको छ । मोदीले के भेनेका छन् भने १७ वर्षसम्म भारतको नेपालप्रतिको जुन नीति थियो, त्यसमा म संशोधन गर्छु । योभन्दा पहिले नेपालमा भद्रगोल थियो, भद्रगोलै गराएको हो । मोदी आएपछि नेपालीहरुलाई धेरै आशा भयो । नयाँ मान्छे आएको छ, नयाँ विचार लिएर आएको छ । मोदीले त म हस्तक्षेप गर्दिँन भनेका छन् ।
तर, म तपाईलाई के भन्छु भने हस्तक्षेप उतैबाट हुन्छ । किनभने नेपाली नेता र दलहरुलाई त बाहिरको कुरा सुन्ने बानी परिसकेको छ । विदेशीहरुको कुरा सुन्ने बानी परिसकेको छ । विदेशी गुहार्ने त यिनीहरुलाई बानी नै लागिसकेको छ । त्यस्तै उनी (विदेशी) हरुलाई पनि बानी लागिसकेको छ । जुन मुलुकले २५ वर्षसम्म यहाँको राजनीतिलाई आफ्नो लगाममा राख्यो, त्यो हिन्दुस्तानले सजिलैसँग त्यो लगाम छाड्ला भन्ने मलाई विश्वास छैन ।
मोदीजीको अत्यन्त राम्रो चाहना भएता पनि उहाँलाई यहाँको जुन भद्रगोल स्थिति छ, त्यसलाई त मिलाउनुपर्‍यो नि त । किनभने यहाँका सबै नेतृत्व वर्गले दक्षिणतिर हेर्छन् । भारततिर हेर्छन् । र, मोदीले स्पष्टसँग के बुझेका छन् भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व छैन, नेपालमा जवसम्म राजनीतिक स्थायित्व आउँदैन, तबसम्म हिन्दुस्तानको विकास पनि राम्रोसँग गर्न सकिँदैन । त्यसैले उनले हस्तक्षेप नै गर्नर्ै खोज्छन् । हेर्नोस् न पहिले आउँदा मोदीले के संसदमा भनेका थिए, पछि नेपाल आउँदा के भने ?
केपी ओलीले मधेसी र माओवादीलाई चिढ्याएका छन्, त्यसैले सबैको मन जित्न सक्ने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि सुनिँदैछ, सुशीलपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
म यो सम्भावना त्यति देख्दिँन । यहाँ चाहे केपी ओलीजी आउनुहोस्, चाहे शेरबहादुरजी आउनुहोस्, जबसम्म बाहिरका तत्वहरु खेल्छन्, त्यतिबेलासम्म केही हुँदैन ।
तपाईले दिल्लीको समर्थन देउवालाई हुँदैन कि भन्न खोज्नुभएको हो ? उहाँले मिलाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिँदैछ…..
उहाँले मिलाएर त भएन नि । इण्डियाको सपोर्टमा प्रधानमन्त्री हुने यो त राम्रो पनि होइन नि । तपाई आफ्नो खुट्टामा उभिएर राजनीति गर्नोस् न । आफ्नो खुट्टामा उभिएर प्रधानमन्त्री बन्नोस् न । त्यो पो त खुबीको कुरा हो । बाहिरका मान्छेले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ कि भन्ने नेपालको राजनीति कुन ठाउँमा पुगेको छ ? किन हामी बाहिर मात्रै हेर्छौं ? यो त अत्यन्त नराम्रो कुरा हो ।
देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नभए सुशील कोइरालाले नै जेठसम्म चलाउने सम्भावना छ कि छैन ?
म त तपाईलाई भनिरहेको छु, यहाँ त परिवर्तन हुँदैछ । यो चार वर्ष त कुनै हालतले जाँदैन । मैले माघ ८ पछि नै ठूलो परिवर्तनको संकेत देख्न थालेको छु । यहाँ फेरि सडक आन्दोलन हुन्छ । सडक आन्दोलन भएका बेलामा मलाई कताकता के लागिरहेको छ भने शायद रामवरण यादवजीले ‘प्रसिडेन्सियल रुल’ लगाउँछन् । किनभने सबैथोक भद्रगोल छ । नेपालमा कुनैथोक मिलेको छैन ।
यो स्थितिबाट देशलाई निकाल्नका लागि मैले बुझेअनुसार केही समय राष्ट्रपतीय शासन लाग्छ । त्यसपछि सदन भंग हुन्छ । सदन भंग हुनेवित्तिकै सबै सडकै मा त पुग्छन् । सडक आन्दोलनको नेतृत्व त पहिलेदेखि नै वैद्यजीले गरिरहनुभएको छ । त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन लाग्यो भने पहिलेकै जस्तो सबै दल मिल्छन् र राष्ट्रपतिको विरोध गर्न थाल्छन् । ठाउँठाउँमा पहिलेजसरी चक्काजाम र ढुंगामुढा हुन थाल्छ । अनि त्यसपछि राष्ट्रपतिले के गर्ने ? राष्ट्रपतिले आर्मीका मान्छेलाई डाक्छन् डाक्छन् । आर्मी रुलको संकेत पनि मैले देख्न थालेको छु । त्यसपछि सिभिलियन राष्ट्रपति रहन्छन्, सेनाले ल एण्ड अर्डर गर्न थाल्छ । र, त्यही स्थितिको पुनरावृत्ति हुन्छ, जुन ज्ञानेन्द्र सरकारका पालामा भएको थियो । त्यसपछि मुलुक फेरि नयाँ एग्रिमेन्टतिर जान्छ ।
कस्तो हुन्छ त्यो एग्रिमेन्ट ?
भारतले १२ बुँदे सम्झौता गराउँदा अमेरिका र अन्य राष्ट्रहरुको पनि समर्थन लिएको थियो । भारतको एजेन्डा गणतन्त्रमात्रै थियो, पश्चिमाहरुले धर्म निरपेक्ष पनि राख्नुपर्छ भने । संघीयता पनि थप्न लगाए । भारतको मूल चाहना के थियो भने राजतन्त्र जाओस्, त्यसपछि देखा जाएगा । तर, यो ८/९ वर्ष अगाडिको कुरा हो, तर अब अन्तरराष्ट्रिय स्थितिमा धेरै फेरबदल आइसकेको छ, अब भारतले नेपालबारे समर्थन जुटाउनका निम्ति पश्चिमा मुलुकको अनुहार हेर्दैन । उसले चीनलाई हेर्छ । चीन जब ल्याटिन अमेरिका पुग्छ, अफि्रका पुग्छ भने उसले नेपाललाई छाड्छ ? छाड्दैन ।
तपाईको विश्लेषणले के भन्छ ? सुशील कोइराला यो देशको दोस्रो राष्ट्रपति बन्दैनन् ?
मैले त सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई गएर भनें, शासन गर्नोस् तपाई । संविधान आउँछ कि आउँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तपाईले गरेर मात्रै संविधान आउनेवाला छैन । तर, शासन त गरेर देखाउनोस् । उहाँले भन्नुभएको थियो, त्यो त सही भनिस् । मैले के भन्न खोजेको हो भने कमसेकम शासन त गरोस् कसैले ।
तर, राष्ट्रपति त सेरेमोनियल भएको हुनाले सुशील त्यहाँ फिट हुनुहोला कि ? नत्र कांग्रेसले शीतलनिवासमा कसलाई पठाउने त ?
यो कुरा त धेरै पहिले चलेको थियो । यसमा मलाई एकचोटि शेखर कोइरालाले नै राष्ट्रपतिमा सुशील कोइराला गइदिए हुन्थ्यो भनेका थिए । तलाई त्यही प्राक्टिकलजस्तो लागेको थियो, त्यही गर्नुपर्दथ्यो । मैले त्यतैतिर लाग् भनेको पनि थिएँ शेखरलाई । तर, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर, अब यो जोड घटाउ, यो रहनेवाला छैन । मान्छेहरु अघाइसकेका छन् ।
के अब शीतलनिवास नै भत्किनेवाला छ ?
निश्चित छ । अन्तरराष्ट्रिय स्थिति नै भत्किन थालिसकेको छ । नेपाल एकदम कमजोर छ । फेलियर स्टेट हुन लागिसक्यो । मैले तपाईलाई पहिले पनि भनिसकें, अब चीन पनि फ्याक्टर रहन्छ नेपालमा । ८ वार्ष्अगाडि नेपालको राजनीतिमा चीन काहिँ थिएन ।
योबेलामा नेताहरुलाई दिने तपाईको सल्लाह के छ त ?
मैले बुझेअनुसार मुलुकको स्थिति अन्त्यन्तै नाजुक छ हेर्नोस् । मुलुक झन् झन् कमजोर भएको छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले विशेषाधिकार प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन्, त्यसपछि दलहरु विद्रोहमा जान्छन् जान्छन् । त्यसलाई जनपथ र सशस्त्र प्रहरीले सक्दैन, त्यसपछि आर्मीलाई नै डाक्नुपर्छ ।
आर्मीलाई डाकिसकेपछि के हुन्छ, म भन्न सक्दिँन । यहाँ सैनिक शासनको ठूलो सम्भावना बढ्दै गएको मैले देखिरहेको छु । तपाई थाइल्याण्डमा हेर्नोस् न । भारतभन्दा पहिल्यै प्रजातन्त्र आएको ठाउँ हो त्यो । अहिले आर्मी रुल छ त्यहाँ । इजिप्टमा हेर्नोस् । पाकिस्तानमा पनि अब सायद सैनिक शासन आउँछ कि ? नेपाललाई पनि ठिकठाक पार्ने हो भने दलहरु त टोटल फेलियर भइसके । टोटल फेलियर । यिनीहरुबाट केही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
तर, सुशील कोइराला, केपी ओली र सुवास नेम्वाङ मिलेर डाङडुङ गरेर भए पनि संविधान जारी गरिदिए मुलुकले निकास पाउँथ्यो कि भन्ने पनि मत बढ्दै गएको छ नि देशमा ? तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?
त्यो पनि घुमाई फिराई त्यही हो । त्यस्तो भएको खण्डमा सडक आन्दोलन त हुन्छ हुन्छ । मधेस जाला, त्यसपछि माओवादी जान्छन् । यो के दोहोरिइरहेको छ भने राजा ज्ञानेन्द्रले लिएका बेलामा पनि यस्तै थियो । कुनै दलहरु मिलेका थिएनन् । राजाले प्रयास गर्दाखेरि पनि दलहरु नमिल्ने, सबैलाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, १०/१२ जना उम्मेदवार थिए ।
त्यसैले राजासँग कुनै उपाय नभएको हुनाले राजाले त्यो कार्यकारिणी अधिकार लिए । अब त्यही स्थिति रामवरणजीले लिनुपर्छ ।
अहिलेचाँहि ज्ञानेन्द्र शाहको भूमिका केही छैन हैन ? शान्तले बसिरहेको देखिन्छ….
त तपाईलाई भनिदिन्छु, यो मुलुकमा राजतन्त्र आउँछ, लेखेर राख्नोस् तपाई । कसैले रोक्न सक्दैन । हिन्दुस्तानले पनि रोक्न सक्दैन । पाँच वर्ष त म भन्दिँन, ६/७ महिनाभन्दा बढ्ता लाग्दैन । ज्ञानेन्द्र नै आउँछन् भन्ने छैन, त्यहाँ हिमानी पनि हुन सक्छिन्, या नाति पनि हुन सक्छन् । तपाई हेर्नोस् न त्यही पृथ्वीनारायण शाहको शालिक तोड्ने यी नेताहरु पृथ्वी जयन्तीमा प्रधानमन्त्री जानुभएन ? सब नेताहरु पुगेका थिए । - onlinekhabar